Ukuphupha iiLagoons Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukuphupha iiLagoons. Amanye amaphupha ayathandeka, amanye awathandeki. Ukuba ufuna ukwazi yintoni intsingiselo yamaphupha? Qhubeka ufunda esi sikhokelo.
IiLagoons zifumaneka kwiindawo ezinqatyisiweyo ezifana neenqaba zamandulo okanye iinqaba ukusuka ngenkulungwane ye-XNUMX neye-XNUMX. Banokufumaneka nakwiipalisade.
Basebenza ukubonelela ngokukhuselekileyo kumdubuli xa esebenzisa isixhobo sakhe. Ukusuka ngaphandle, ukuwolana (ukuvuleka okuncinci kudonga olusetyenziselwa ukudubula) kujongeka njengokuqhekeka okuxineneyo kudonga olungqingqwa lwenqaba. Ngaphakathi, ibonelela ngendawo eyoneleyo yokubeka isaphetha, umnqamlezo okanye inkanunu kwithagethi. Xa undwendwela inqaba, ukubona kwangaphambili onakho ngamachibi (iwindow) ngamava akhethekileyo, ngakumbi kuba awunakubonwa ngaphandle.
Ukuba umntu uphupha ngokwamkelwa (Ukuvula uthango lokudubula ngokukhuselekileyo), kunokwenzeka ukuba babe nakho ukuhlaselwa kwinqaba. Mhlawumbi uzikhusela ngokwakhe njengejoni okanye umlo ephupheni. Kodwa unokuba ngomnye wabahlaseli kwaye alwe nomchasi ongabonakaliyo. Kukho imiba eyahlukeneyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa utolika amaphupha.
1 Uphawu lwephupha «amachibi» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «izikhewu» - Ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amachibi» - Ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «amachibi» - Ukutolikwa ngokubanzi
Inqaba sisakhiwo esikhuselayo. Uphawu lwephupha «izikhewu» kukuchazwa okucacileyo indlela yokukhusela. Umphuphi kuthiwa uziva ehlaselwa kwaye ecinezelwe ebomini bokwenyani. Ke jonga indawo ekhuselekileyo ephupheni. Izikhephe ezibamba imipu zikunika ukhuseleko kunye nesembozo.
Oku kunokuba luphawu ekutolikeni amaphupha ukuba umphuphi mhlawumbi uhlala ehamba phambili kubomi bemihla ngemihla kwaye ngenxa yoko umenza abe sesichengeni. Kwelinye icala, uphawu lwephupha lunokuqondwa njengesimemo sokoyisa ukhuseleko lomntu.
Ayikwazi kuphela ukufihla kwichweba (kuyilo lomkhosi, luhlobo lomqobo), ikwabonelela ngokuhlaselwa komntu kwindawo ekhuselekileyo. Ukuba umntu uphupha ngokudubula umdlali welinye iqela ngesixhobo esivela apho, uphawu lwephupha lubonisa ungquzulwano kunye nobunzima. Umphuphi angathanda ukucima iinkalo ezithile zobomi bakhe, mhlawumbi iintlungu ezithile okanye inkxalabo ngokubanzi.
Kutoliko oludumileyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "izithuba" liquka Isimo sokuzikhusela. Iphupha lokuhlaselwa kwenqaba apho iphupha likhoyo sisilumkiso ngokuchasene nobuqhetseba kunye neenjongo zenkohliso.
Uphawu lwephupha «izikhewu» - Ukutolikwa kwengqondo
Inqaba kunzima ukuyithatha kwaye ke khu seleko. Ukusuka kwisango, iphupha linokujolisa kuhlaselo lomntu ngaphandle kokuzibeka engozini kwangoko.
Isimboli yephupha isetyenziswa kutoliko lwengqondo ngephupha njengophawu lwesidingo esichaziweyo sokhuselo nokhathalelo, kodwa kunye ne kufuneka wenze into. Ukuphupha ungazi, kodwa kubalwe ngokucacileyo, ufuna ukucima iimvakalelo ezingafunekiyo kunye neempembelelo. Ephupheni naye uzikhusela ngokuchasene neempembelelo zangaphandle oziva ngathi unyanzelekile.
Ukongeza, ukomelela luphawu lwesizungu kunye nokuba yedwa, kunye nemvakalelo yokungabaluleki ekutolikeni amaphupha. Uphawu lwephupha «amachibi» luquka uloyiko kunye nokungaqiniseki Ezifihliweyo kwi-subconscious. Ukulwela amandla anikezelwa ngokhuseleko ephupheni kuyabonisa iingxaki phakathi kobuntu bephupha kunye nendawo ahlala kuyo.
Ukuba isibonelelo sitshatyalalisiwe ngaphandle kwayo yonke imizamo yokhuselo, ukuphulukana nokuzithemba kubonakala kwisimboli yephupha ngokwentetho yengqondo yephupha.
Uphawu lwephupha «amachibi» - Ukutolikwa kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, inqaba iquka indawo ekhuselekileyo apho umntu ophuphayo angakhula kwaye aziveze ngengqondo. Ukukhusela indawo yakho yokomoya luvavanyo. Ukuba iphupha liyakoyisa oku, uya kufikelela kulwazi olunzulu.